आजको राशिफल – २०७८ फागुन ३० गते, साेमवार, १४ मार्च २०२२ | eKhabarSanjal
Home अन्य आजको राशिफल – २०७८ फागुन ३० गते, साेमवार, १४ मार्च २०२२
आजको राशिफल – २०७८ फागुन ३० गते, साेमवार, १४ मार्च २०२२
२०७८ फागुन ३० गते, साेमवार, १४ मार्च २०२२। फाल्गुण शुक्लपक्ष एकादशी तिथि, १०ः५४ बजेदेखि द्वादशी। तिष्य नक्षत्र। चन्द्रराशि– कर्कट।
अनावश्यक हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दु:ख पाइनेछ। प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। बेसुरमा दिइएको वचनले पनि समस्या निम्त्याउनेछ। साइनो गाँस्नेहरूको भरपर्दा लक्ष्य प्राप्ति नहुन सक्छ। पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने हुन सक्छ। समयमा सजग नबन्दा शुभचिन्तकहरू समेत टाढिनेछन्। दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ मिल्नेछ।
वृष परिस्थिति अनुकूल देखिए पनि प्रतिस्पर्धीहरूले दुःख दिन सक्छन्। अरूकाे भरपर्दा काम बिग्रन सक्छ। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुहोला। बलजफ्तीले चुनौती समेत निम्त्याउन सक्छ। पहिलेका कमजोरी र अप्ठ्यारा परिस्थिति सुल्झाउन केही समय जुट्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा पनि पाइनेछ।
छिमेकमा असमझदारी बढ्ने हुँदा होसियारीसाथ काम लिनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। व्यवसायमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन सक्छ। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। केही खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। काममा साथीभाइको सहयोग जुट्नेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु हुनेछ। सोखले मालमत्ता जुटाउन प्रेरित गर्नेछ।
राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले उत्साह जाग्नेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुट्नेछ। तर समयमै गम्भीर नबन्दा नचिताएको समस्या देखिन सक्छ। आफ्नै कमजोरीले इष्टमित्र टाढिनेछन्। काम राेकिनाले थप अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ला। सानो भूल गर्दा मिहिनेतको फल अरूलाई सुम्पनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अरूकाे करकापमा परी काममा जुट्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। परिश्रमका तुलनामा प्रतिफल कम देखिनेछ। खर्च तथा विवाद बढ्ने समय रहेकाले महत्त्वाकांक्षी योजनामा अघि नबढ्नुहोला। सम्भावना देखिए पनि सोचेको उपलब्धि समयमा प्राप्त नहुन सक्छ। प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। सामान्य कामका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ।
परिस्थिति प्रतिकूल देखिए पनि भाग्यले विभिन्न अवसर जुराउनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा पदीय जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना छ। विगतका कमजोरीमा क्रमश: सुधार आउनेछ। लगनशीलताले राम्रै लाभ दिलाउन सक्छ। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्।
काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने परिस्थिति रहनेछ। अरूका काममा धेरै समय खर्चनुपर्ला। व्यस्तता बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ। गोपनीयता बाहिरिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला। स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा सजग रहनुहोला। सानातिना समस्यामा अल्झनुपरे पनि बुद्धिको उपयोगले समस्या सुल्झाउन सकिनेछ।
अधिक परिश्रमले थकान र कमजोरी निम्त्याउन सक्छ। सरोकार नभएका विषयमा चासो राख्नाले दुःख पाइनेछ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन् भने सहयोग गर्नेहरू कमै भेटिनेछन्। शुभचिन्तकहरू समेत टाढा हुनेछन्। यात्राको प्रक्रियामा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आफ्नो उपलब्धिमा अरूले दाबी गर्ने सम्भावना रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला।
आँटले सजिलै लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। प्रयत्न गर्दा दिगो फाइदा हुने काम सम्पादन हुनेछ। सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। नयाँ काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। व्यापारले फाइदा दिनेछ। तत्काल धेरै गर्न नसकिए पनि पछिका लागि जग बसाउने समय छ।
Previous articleप्रकाश सपुतप्रति समर्थन आपत्ति मान्नुपर्ने कुरा छैन : बाबुराम भट्टराई
Next articleमुलुकको अर्थतन्त्र भयवह अवस्थामा पुगेको दावी : केपी शर्मा ओली
आजको राशिफल – २०७८ चैत १ गते, मंगलवार
वास्तुशास्त्र : दाम्पत्य सुखका लागि शयन कक्ष?
आजको राशिफल – २०७८ फागुन १९ गते, बिहीवार
नासाले मंगल ग्रहमा पर्सिएन्स रोभर सुरक्षित रूपमा अवस्थित गरे पछिका केहि तस्बिरहरु !!
अभिनेता सलमान खानले सहयोग गरे : रेमो डिसुजा
मुलुकको अर्थतन्त्र भयवह अवस्थामा पुगेको दावी : केपी शर्मा ओली
घरमै बसी बसी आइपिओ कसरि बेच्ने ??